Higadona Ny Amboara Aziatika 2015 Ao Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2015 19:50 GMT
Herinandro mialoha ny lanonam-panokafana sy ny lalao voalohany amin'ny Amboara Aziatika 2015 amin'ny 9 Janoary, ny roa andro tao Melbourne dia nahitana maripana 39° sy 38°C [102° sy 101°F] izay nandalovana alina nahitana hafanana ambany indrindra 27°C. Adelaide, any andrefan'i Melbourne, dia niaina ny 44° sy 37°C [111° sy 99°F]. Ireo maripana ireo dia mitovy amin'ny maripana ankapobeny efa mampiady hevitra fatratra heverina hitranga mandritra ny fandraisan'i Qatar ny Mondialy 2022. Na izany aza, noho ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny moron-dranomasina atsimo atsinanana, dia mety hangatsiaka kokoa amin'ny lalaon'ny tsirairay. Hafanana mahafinaritra eo amin'ny 22°C [72°F] eo no tsinjovina amin'ny andro fanombohana.
Ny fiakaran'ny maripana no mitondra ireo doro-tanety mahery vaika any amin'ny Fiadidian'i Victoria sy Aostralia Atsimo.
Manana mpikambana 47 ny Konfederasionan'ny Football Aziatika. Ekipa 16 sisa tavela hifaninana handrombaka ny Amboara: Aostralia, Bahrain, Shina Entim-Bahoaka, Iran, Iraq, Japan, Jordania, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Koety, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saodita, Emirà Arabo Mitambatra ary Ozbekistan.
Hong Kong, Indonezia, Libanona, Malayzia, Singapore, Syria, Thailand, Vietnam ary Yemen no nihintsana tamin'ny dingana farany hahatafakarana amin'ity dingana ity.
Midi-droa i Aostralia – amin'ny maha-firenena mpampiatrano azy sy amin'ny maha-mpitana ny laharana faharoa azy hatramin'ny 2011.
Vitan'i @Tim_Cahill ve ny mitondra ny @Socceroos mankany amin'ny fandresena ao amin'ny tanin'ny tena amin'ny #AC2015? Mieritreritra izany ireto mpankasitraka amin'ny sary ireto (sary @lukar_t)
Tokony ho mety amin'ny ekipa folo avy ao Afovoany Atsinanana ny hafanana na dia avy any amin'ny ririnina aza ry zareo, ary maro koa ny mpilalaon'ny Socceroos no milalao any Eoropa.
Raha tsy fantatrao moa hoe izany izany Socceroos na Red Warriors [Mpiady Mena] izany, dia malalaka tsara ny fotoana hianarana ny anarambositry ny ekipa rehetra milalao.
Azonao atao ny manjohy ny diezy Twitter ofisialy ao amin'ny #AC2015 sy ao amin'ny kaonty instagram an'ny AFC. Maro amin'ireo ekipa ireo ihany koa no manana ny kaontiny Twitter sy pejiny Facebook manokana. Tahaka izany ihany koa ny biby famantarana, wombat Nutmeg @nutmeg, hita ato miaraka amin'ny mpankafy fanatanjahantena fanta-daza:
Jereo indray aho ao amin'ny gazety! RT @rdhinds ny lahatsoratro amin'ny endrika tsy tontan'ny ela.
Tsy azo idifiana, fa efa nanatevin-daharana ny fanaitairana sahady ny politika taorian'ny nitsipahan'i Aostralia an'i Palestina tao amin'ny filankevi-piarovan'ny Firenena Mikambana:
Mahamenatra tokoa. Eto ankatoky ny fampiatranoana an'i Palestina dia nitsipaka ny Palestiniana ho manana sata maha-fitantanam-pitondrana azy ao amin'ny Firenena Mikambana i Aostralia.
Raha jerena ny toetran'ny fifandraisana iraisampirenena ao Azia amin'izao fotoana izao, dia afa-manantena ny isian'ny sakoroka ivelan'ny kianja isika amin'ity volana hoavy ity.
[Sary famantaran'ny Lalao Aziatika sy ny biby famantaran'ny Konfederasionan'ny Football Aziatika.]